युद्धका डोब सम्झाउने कथा- कला - कान्तिपुर समाचार
नाटक समीक्षा - पल्पसा क्याफे
युद्धका डोब सम्झाउने कथा
'युद्ध भयो तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा बिसाउन अझै सकिएको छैन । द्वन्द्व व्यवस्थापनका काम १५ वर्षदेखि अल्झेका अल्झियै छन् । टुप्लुक दैलोमा आफन्त आउलान् कि भन्ने पर्खाइमा बेपत्ताका परिवारले अझै बसेका छन् । नाटकमा रुपान्तरित चर्चित उपन्यास 'पल्पसा क्याफे'ले तीनै युद्धका डोबहरुलाई फेरि एकपटक सम्झाएको छ ।
वैशाख १९, २०७९ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — 'तिमी किन एक्लै बसेको, मजस्तै कसैलाई कुरिबसेको त होइन नि?' सामान्य भलाकुसारीमै हजुरआमा गम्भीर प्रश्न गर्छिन् ।
'होइन, हजुरआमा,'पुस्तक खोज्दै गरेका दृश्यले जवाफ फर्काउँछ,'गाउँ नगएको धेरै भयो ।'
'घर जाँदै गर्नु, घरले पर्खिन्छ…' चर्खामा धागो मिलाउँदै हजुरआमा बोल्छिन् ।
जेलिएका धागो मिलाउन हजुरआमालाई सघाउन थाल्छन्, दृश्य । आफ्नो ग्यालरीमा आएकी एक युवतीले उनका चित्र(पेन्टिङ)का रङ कालो भएको प्रतिक्रिया दिएपछि पुरानो कलासंस्कृतिका सन्दर्भ पुस्तक खोज्दै दृश्य हजुरआमाकहाँ पुगेका हुन् । ती युवतीले चिसो पेन्टिङका पछाडि भित्ताका रङ कारक बनेको सुनाएपछि नै हो दृश्य त्यहाँ पुगेको । हजुरआमा धागो मिलाउँदै हुन्छिन्, दृश्यले पुस्तक खोतल्न थाल्छ । अनि खोतल्न थाल्छन्, कसैको पर्खाइमा बसेकी हजुरआमाका नखोतलिएका कुरा । त्यसपछि हजुरआमा र दृश्यको त्यो मिठो भेटबारे लेखिएको चिठी पार्श्व धून बनेर गुञ्जिन्छ । मण्डला थिएटरमा मञ्चनरत नाटक पल्पसा क्याफेको दृश्य हो यो ।
लेखक नारायण वाग्लेको उपन्यास 'पल्पसा क्याफे'लाई नाट्य रुपान्तरण गरेका हुन् सुरज सुवेदीले । युद्ध र प्रेमको सम्मिश्रण उपन्यासको नाममा विमल सुवेदीले नाटक निर्देशन गरेका छन् । पाठकले मानसपटलमा कोरिसकेका उही पुरानै पात्र, परिवेश र घटनाक्रमलाई उनले मञ्चमा उतार्ने प्रयास गरेका छन् । उपन्यासका पात्रलाई मञ्चमा उभ्याउँदा पाठक आफूले बाँचेको पात्र अनि परिवेशलाई दुरुस्तै देख्न रुचाउँछन् । त्यही पात्र र परिवेश मिल्दोजुल्दो नभइदिँदा पाठक हुँदै दर्शक बनेकाहरुलाई दृश्यमा भनिएका कथा खल्लो लाग्न सक्छ । तर, यो नाटकका लेखक अनि निर्देशकद्वय सुवेदीले भने 'पल्पसा क्याफे'का पाठकलाई केही हदसम्म उही पुरानै दृश्य, पल्पसा, सिद्धार्थसँग भेटाउने प्रयास गरेका छन् । नेपालको राजनीतिको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा उभिएर भनिएको दृश्य र पल्पसाबीचको प्रेम अनि युद्धका डोबहरुमा नाटकले दर्शकलाई डोहोर्‍याउँदै लान्छ ।
पुस्तकमा पल्पसा र दृश्यको प्रेममार्फत युद्धका परिवेश र घटनाहरू लेखिएका छन् । नाटकमा भने प्रेमभन्दा बढी द्वन्द्वका विषय समेटिएका छन् । नाटकको सुरुमै कलाकारहरु बेलुनलाई बेस्सरी मुसार्छन्, त्यसबाट निस्कने कर्कशपूर्ण आवाजले नै युद्ध कस्तो थियो भन्ने झल्को दिन्छ । बम पड्किन थाल्छ । पृष्ठभूमिमा युद्ध भूमिका चित्राकार सुनिन्छन् । युद्धको नमिठो धुनसँगै पृष्ठभूमिमा बज्ने बन्दुक, युद्धको कोलाहलले दर्शकको मुड युद्धतिर तानिन थाल्छ । त्यसपछि मञ्चमा देखा पर्छन् पल्पसा अनि दृश्य । गोवामा संयोगले भेटिन्छन् यी दुई । दृश्य पेशाले चित्राकार । काठमाडौंको कोलाहलबीच शान्त चित्र कोर्न सक्ने चित्रकार ।
अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएकी पल्पसा दृश्यका चित्रका फ्यान । अमेरिकाको कथामा डकुमेन्ट्री बनाए पश्चिमा कथाहरुको दास बन्ने सोचले पल्पसालाई काठमाडौं फर्काएको हो । डकुमेन्ट्री फिल्ममेकिङमार्फत उनी आफ्नै देशका कथा भन्न चाहन्छिन् । गोवामा एकअर्कासँग ठोक्किएका यी दुई काठमाडौं फर्केपछि पनि भेटिरहन्छन् । अव्यक्त कुराहरुलाई चिठ्ठीमार्फत आदानप्रदान गर्छन् । चित्रमार्फत नजिक भएका उनी दुईको प्रेमलाई चिठ्ठीहरुले जोडदिन्छ । चिठ्ठीहरु अनि एकाध भेटबाट मौलाउँदै गएको पल्पसा र दृश्यको प्रेममा दुईको प्रेमबीच सशस्त्र संघर्ष मिसिँदै जान्छ । उत्कर्षमा पुग्दै गरेको युद्ध अनि पलाउँदै गरेको यी दुईको प्रेम 'पल्पसा क्याफे'मा प्रस्तुत छ ।
कृतिलाई दृश्यमा परिणत गर्दा कथाको मर्म मर्ने खालका थुप्रै प्रयासहरु विगतमा असफल बने । तर 'पल्पसा क्याफे'मा हजुरआमासँगको भेट, युद्धमा होमिन तयार किशोरी, दृश्यकहाँ सेल्टर माग्न आउने साथी सिद्धार्थ, मीत बा र आमालाई भेट्न जाँदाका घटनाक्रम छुटेका छैनन् । उपन्यासको मर्म समेटिएकै कारण मञ्चमा पल्पसा क्याफे अधुरो लाग्दैन । तर, दृश्य र पल्पसाबीचको प्रेमलाई उपन्यासमा झैं बलियो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । तर, युद्धकालको एउटा समय, परिवेश अनि त्यसबेलाका पात्रहरुले बाँचेको जीवनलाई भने नाटकले बोलिदिएको छ ।
थाल फ्याँक्दै गरेको बिम्बात्मक दृश्य निकै सशक्त पूर्ण ढंगले देखाइएका छन् । थालहरू एकापसमा ठोक्किन्छन् । चर्को आवाज गुञ्जिन्छ । दुई विचारको ठक्कर, दुई सिद्धान्तको द्वन्द्व, युद्धमा लडेका दुई पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त दृश्यमा थालहरू ठोक्किँदाको आवाजले युद्धको कोलाहल देखाइदिन्छ । त्यही दृश्यलाई निकै कलात्मक ढंगले युद्धका लागि तयार भएकी किशोरीसँग जोडिदिएको छ । शब्द जति सशक्त हुन्छन्, दृश्य त्यो भन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । युद्धका कमान्डर सिद्धार्थको मृत्युलाई पनि कलात्मक रुपले प्रस्तुत गरिएको छ ।
सेना र जनयुद्धका लडाकुबीचको द्वन्द्वलाई गीतहरुमार्फत निकै कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । स्टेजको दायाँपट्टि उभिएका जनयुद्धका लडाकुहरु गाउँछन्,'हातमा कलम हुनेहरु कलम लिएर उठ। बाजा बजाउन जान्नेहरु बाजा लिएर उठ । गाउँगाउँबाट उठ, बस्तीबस्तीबाट उठ । यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ…।' त्यसपछि सेनाहरु गाउँछन्,'रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो…।'
नाटकले द्वन्द्वकालले छोडिदिएको आघात, घाउहरुलाई सम्झाइदिन्छ । हुर्कँदै गरेको छोरीलाई जनयुद्धमा पठाउँदा एक बुवाले झारेको आँसु र पीडालाई देखाइदिन्छ । बारुदका आवाज । पर्दामा देखाइने थोत्रा गोल्डस्टार । आफ्नाहरुलाई गुमाउनेहरुको त्रास । दुई पक्षको युद्धका बीचमा पिल्सिएका जनता । मारिएकाहरुको लास । परिवर्तनका लागि क्रान्ति गरेका सिद्धार्थहरु । गलत व्यवस्था सच्याउन हिँडेकाहरुको अनुहार नाटकमा प्रस्तुत गरिएको छ । युद्ध केका लागि र कसका लागि गरियो, कस्ता व्यवस्थाको विरुद्ध थियो युद्ध ? अनुत्तरित यीनै प्रश्नहरूमाथि सोच्न बाध्य पार्छ नाटकले ।
सेल्टर लिन आएको सिद्धार्थले पहिरेको सफा चिट्टिक्क लुगालाई खोलिँदा देखिने रगतका दागहरुले युद्धमा बगेका रगत झल्को दिन्छ । उक्त दृश्यमा क्रान्तिका लागि लड्दै गरेको सिद्धार्थलाई दृश्यले भन्छ,' तिम्रो यो युद्धमा जनता मर्दैछन् । निर्दोष जनता मारेर आएको व्यवस्थामा केही नयाँ चिज हुन सक्दैन । युद्ध हिँड्ने बाटोमा को-को हराए, को-को डराए, को-को पुरिए, विश्व नै हतियारबद्ध छ । यहाँ मान्छेको हिसाब, मान्छेको हिसाब कसले गर्ने ?'
युद्धको समयमा बिहान घरबाट हिँडेकाहरू फर्केर आएनन् । आउँछु भनेर पर्खाउनेहरू फर्किएनन् । उनीहरूलाई पर्खिरहेकाहरूको आवाजमा दृश्यले बोल्छ, 'हो त हजुरआमा एउटा सिंगै मान्छे त्यसै कहाँ हराउँछ । उ हराउन त, धेरै मान्छेहरू चुप बस्नुपर्छ । उ हराउन त धेरै चिजहरु चुप बस्नुपर्छ । हराउँदै गरेको उसलाई कसै न कसैले त देखेको होला । हराउँदै गरेको उसलाई कसै न कसैले त सुनेको होला ?
युद्धमा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परे । तर निकै थोरै घटनामा मात्र छानबिन भएको छ । युद्धमा विद्रोही शक्ति, प्रहरी/सेना र सर्वसाधारण गरी १७ हजारभन्दा बढी मारिए, सयौं बेपत्ता पारिए । करिब १ दशक चलेको राज्य र विद्रोही शक्तिबीचको युद्ध २०६३ साल मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपछि टुंगियो । विद्रोही शक्ति पटक-पटक सरकारमा आए । तर द्वन्द्वका अवशेष अझै बाँकी छन् ।
नाटकमा भनिएझैं युद्ध सुरु गरियो, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा बिसाउन अझै सकिएको छैन । द्वन्द्व व्यवस्थापनका काम अझै बाँकी छन् । टुप्लुक दैलोमा आफन्त आउलान् कि भन्ने पर्खाइमा बेपत्ता परिवार अझै बसेका छन् । आफन्त गुमाएकाहरू न्याय निरुपणको पर्खाइमा छन् । युद्धमा घाइते भएका व्यक्तिहरू शरीरमा गोली र छर्रा बोकेर बसिरहेका छन् । अनि युद्धमा होमिँदै गरेकी छोरीलाई बाबुले सम्झाएको नाटकको एक संवाद समयसान्दर्भिक लाग्छ, 'छोरी शरीरमा गोली बोकेर कहिल्यै नहिँड्नु । त्यसले जीवनभर पोलिरहन्छ ।'
अडियोमा वाचन हुने चिठ्ठी, डिजिटल प्रोजेक्सनमा देखाइने चित्र अनि जीवन्त लाग्ने पात्रहरुमार्फत मञ्चमा द्वन्द्वको वास्तविक स्वरूप र दु:ख देखाइदिएको छ । 'ल्यामपोस्टमुनि आगो तापिरहेछन् नानीहरु । युगौंदेखि छ जाडो…'बोलको गीत, मिठा संवाद, बिम्बको बेजोड प्रयोग गरिएको यो नाटकमा दर्शकहरूका लागि अवसर हो, युद्धलाई फर्केर हेर्ने । अनि प्रश्न गर्ने, व्यवस्था फेरिए, क्रान्ति सकियो के युद्धले खोजेको परिवर्तन आयो ? ।नाटकमा प्रप्सहरुका प्रयोग प्रशंसालायक पक्ष हुन् ।
हजुरआमासँगको भेटमा दृश्यले प्रयोग गर्ने पुस्तकहरू त्यसका उदाहरण हुन् । आफ्नो अभिनयमार्फत संगीता थापाले सबैभन्दा बढी दर्शकको ध्यान तानेकी छन् । उनले हजुरआमाको अभिनयलाई सशक्त ढंगले प्रस्तुत गरेकी छन् । सानी 'फुच्ची' को भूमिकामा पूर्णिमा आचार्यले गरेको अभिनय उम्दा लाग्छ । पल्पसाको भूमिकामा सृष्टि श्रेष्ठ र दृश्यको भूमिका निर्वाह गरेका निर्देशक विमल सुवेदीको अभिनय पनि प्रशंसनीय नै छ ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ १७:०७
बनेपा नगर प्रमुखले दिए राजीनामा
वैशाख १९, २०७९ नगेन्द्र अधिकारी
काभ्रे — बनेपा नगरप्रमुख लक्ष्मी नरसिं वादेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शनिबार राजीनामा घोषणा गरेका नगरप्रमुख वादेले नगर उपप्रमुख रेखा सापकोटा दाहाललाई सोमबार राजीनामा बुझाएका हुन् । नगरप्रमुखले उपप्रमुख र उपप्रमुखले प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएमा उक्त पद रिक्त हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
एमाले काभ्रेका इन्चार्जसमेत रहेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकूलप्रसाद बाँस्कोटा र नगर कमिटी अध्यक्ष रत्नकुश रञ्जितकारले आफूसँग सल्लाहसमेत नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणको विषयमा अन्तिम समयमा धोका दिएकाले वादेले नगर प्रमुख पदबाट राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरेका थिए ।
एमाले बनेपाको ११ वर्ष नेतृत्व गरेका उनले नगर प्रमुख र पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत त्याग गरेको बताएका छन् ।
एमालेले नगर कमिटी अध्यक्ष रञ्जितकारलाई नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा अखिल नेपाल महिला संघ काभ्रेका अध्यक्ष विमला सापकोटा दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ १६:५६